भारतीय सेनापति कात्तिक १८ मा नेपाल आउने : चिसिएको सम्बन्ध सुधारको संकेत ? – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
भारतीय सेनापति कात्तिक १८ मा नेपाल आउने : चिसिएको सम्बन्ध सुधारको संकेत ?
काठमाडौं : काठमाडौं : भारतका सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे कात्तिकको तेस्रो हप्ता नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । भारतका २८ औं सेनाध्यक्ष नरवाणे कार्तिक १८ मा नेपाल भ्रमणमा आउन निश्‍चित भएको हो। त्यसका लागि जंगीअड्डाले विशेष तयारी थालेको छ।
नेपालसँग कुनै पनि परामर्श र सहमति बिना भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबार जाने सडक बनाएर वैशाख २६ गते उद्घाटन गरेको थियो। भारतका रक्षमन्त्री राजनाथ सिंले लकडाउनको अवसर छोपेर भिडियो कन्फेरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि यसको नेपालमा व्यापक विरोध तथा आलोचना गरेको थिए। त्यसको प्रतिक्रियामा भारतीय सेनाका प्रमुखनरवणेले चीनतर्फ इशारा गर्दै तेश्रो देशको आडमा नेपालमा उक्त विरोध भएको हुनसक्ने धारणा राखेका थिए। त्यो अभिव्यक्तिले उनी विवादमा तानिएका थिए। अन्नपूर्णबाट